Izizathu eziqhelekileyo zokuFikelela koGcino lwedatha
Ikhaya iimveliso DataNumen Access Repair Izizathu eziqhelekileyo zokuFikelela kuRhwaphilizo
Izizathu eziqhelekileyo zenza ukuba ugcino lwedatha yokuFikelela kaMicrosoft yonakele okanye yonakaliswe
Zininzi izizathu eziza kubangela ukuba ifayile yakho ye-MDB yokuFikelela yonakaliswe okanye yonakaliswe. Sizihlela ngokwamacandelo amabini, oko kukuthi, izizathu zehardware kunye nezizathu zesoftware.
Nanini na xa izixhobo zakho zisilele ekugcineni okanye ukuhambisa idatha yolwazi lwakho lokufikelela, iziseko zedatha ziya konakaliswa. Kukho iintlobo ezintathu ikakhulu:
Ukusilela kweDatha yokuGcina uLwazi. Umzekelo, ukuba idiski yakho enamacandelo amabi kwaye ifayile yakho yokufikelela kwi-MDB igcinwe kula macandelo. Emva koko unokufunda kuphela icandelo lefayile ye-MDB. Okanye idatha oyifundileyo ayichanekanga kwaye igcwele iimpazamo.
Isixhobo esingalunganga senethiwekhi. Umzekelo, indawo yogcino lwedatha ihlala kwiseva, kwaye uzama ukufikelela kuyo kwikhompyuter yomthengi, ngokusebenzisa amakhonkco enethiwekhi. Ukuba amakhadi enethiwekhi, cables, imizila, iihabhu kunye nezinye izixhobo ezakha amakhonkco enethiwekhi zineengxaki, emva koko ukufikelela kude kwiziko ledatha le-MDB kunokulenza lonakaliswe.
Ukusilela kwamandla. Ukuba ukusilela kwamandla kuyenzeka xa ungena kwindawo yolwazi ye-MDB, enokushiya iifayile zakho ze-MDB zonakele.
Zininzi iindlela zokuthintela okanye ukunciphisa ukufikelela kurhwaphilizo kwiziko ledatha ngenxa yeengxaki zehardware, umzekelo, i-UPS inokunciphisa iingxaki zokungaphumeleli kombane, kwaye ukusebenzisa izixhobo zekhompyutha ezinokuthenjwa kunokunciphisa amathuba okonakala kwedatha.
Kananjalo uninzi lokonakaliswa kwedatha yokufikelela kwenzeka ngenxa yemicimbi enxulumene nesoftware.
Ukubuyiselwa kweFayile engalunganga. Unokufumanisa ukuba akukholeleki ukuba inkqubo yokubuyisela kwifayile inokubangela ukonakaliswa kwedatha yokufikelela. Kodwa enyanisweni, ngamanye amaxesha xa inkqubo yakho yefayile yaphukile, kwaye uzama ukuqesha isixhobo sokubuyisa idatha okanye ingcali yokufumana iifayile ze-MDB kuyo, iifayile ezifunyenweyo zisenokuba zonakele, kuba:
Ngenxa yenkqubo yefayile yentlekele, amanye amalungu efayile yoqobo yedatha yedatha ye-MDB yile lost ngokusisigxina, okanye ubhalwe ngaphezulu kwedatha yenkunkuma, eyenza ifayile yokugqibela ye-MDB egcinwe ingaphelelanga okanye inedatha engachanekanga.
Isixhobo sokubuyisela okanye ingcali ayinabo ubuchwephesha obaneleyo ukuba / yaqokelela idatha yenkunkuma kwaye iyigcine njengefayile enolwandiso lweMDB. Njengoko ezi zinto zibizwa ngokuba ziiMMD zingenayo nayiphi na idatha esebenzayo yolwazi lokuFikelela, azisebenzi kwaphela.
Isixhobo sokubuyisela okanye ingcali iqokelele iibhloko zedatha ezichanekileyo kwifayile ye-MDB, kodwa ayizidibanisanga ngokulandelelana kwazo, nto leyo eyenza ukuba ifayile yokugqibela ye-MDB egcinwe ingenakusebenziseka.
Ke ngoko, xa inkqubo yefayile yentlekele isenzeka, kuya kufuneka ufumane isixhobo esichanekileyo sokufumana kwakhona idatha / ingcali yokufumana iifayile zakho zeenkcukacha ze-MDB. Isixhobo / ingcali embi iya kuyenza mandundu imeko endaweni yokuba ibengcono.
Intsholongwane okanye enye iSoftware enobungozi. Iintsholongwane ezininzi, ezinjengeTrojan.Win32.Cryzip.a, Iya kuchaphazela kwaye yonakalise iifayile zokufikelela kwi-MDB okanye izenze zingafikeleleki. Kuyacetyiswa ukuba ufake isoftware esemgangathweni yokulwa intsholongwane kwinkqubo yakho yedatha.
Bhala usebenze ngokuKhupha. Kwimeko yesiqhelo, kuya kufuneka uyeke ukuFikelela kamnandi ngokugcina lonke utshintsho lwakho kwisiseko sedatha se-MDB emva koko ucofe u "Phuma" okanye "Vala" imenyu yemenyu. Nangona kunjalo, ukuba ukuFikelela kuvaliwe ngokungaqhelekanga xa uvula kwaye ubhala kwindawo yogcino lwedatha ye-MDB, i-Jet database injini inokumakisha indawo yogcino-zincwadi njengomrhanelwa okanye onakalisiweyo. Oku kunokwenzeka ukuba ukusilela kwamandla okukhankanywe apha ngasentla kuyenzeka, okanye ukuba uyeka ukuFikelela ngokunqakraza "Ukuphelisa Umsebenzi" kwiWindows Task Manager, okanye ukuba ucima ikhompyuter ngaphandle kokuyeka ukufikelela kunye neWindows ngesiqhelo.
Iimpawu zoLwazi lokuFikelela koRhwaphilizo:
Kwireferensi yakho, siqokelele uluhlu lweempazamo xa ungena kwifayile eyonakalisiweyo ye-MDB.
Lungisa iiNkcukacha zoFikelelo eziRhwaphilizayo:
Ungayisebenzisa imveliso yethu yokuphumelela amabhaso DataNumen Access Repair ukuba fumana kwakhona ulwazi lwakho lokufikelela olonakeleyo.
Urhwaphilizo lweMicrosoft Access MDBs FAQ